Iflethi EPHOLILEYO, intliziyo yaseKongsberg! - I-Airbnb
Iflethi EPHOLILEYO, intliziyo yaseKongsberg!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRosie
Iflethi okanye indlu ekwicomplex epholileyo nenamahlathi afudumeleyo ebandayo eNorway kunye neendawo ezintle zedolophu. Ngekhitshi lakho, indawo eqhelekileyo, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela, uya kuziva wamkelekile kwaye usekhaya.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex ikumgangatho osezantsi wendlu yethu, kodwa iyibona kakuhle idolophu. Sinendawo yokungena eyintloko kodwa nawe ufumana umnyango weflethi okanye indlu ekwicomplex. Siyakuhlonipha njengeendwendwe zethu esizithandayo kwaye siyathemba ukuba siza kufumana intlonipho efanayo.
Nceda, ungatshayi ngaphakathi ibe akukho nkunkuma.
Ukuhamba imizuzu eyi-15 ukuya embindini wedolophu ukuze uthenge uze utye kwiivenkile zokutyela ezintle kunye nokubona icawa enye entle yaseKongsberg ngeefoto ezintle kunye nemizuzu eyi-15 yokuya Kwiziko leSki ukuze wonwabele ubusika! Kufuphi kakhulu neentaba ukuze unyuke intaba ixesha elide okanye elifutshane! I-Kongsberg yaziwa ngeMigodi yayo, ngoko kutheni ungatyeleli nakumava esiliva? Ukuhamba imizuzu eyi-5 ukuya kwiYunivesithi yaseKongsberg kunye nemizuzu eyi-15 ukuya kwiTeknoloji Park, apho iinkampani zeteknoloji ezahlukeneyo zikhoyo. Sinevenkile yokutya kwindlala yakho nokwanelisa kwimizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo kuphela!
Siphila kumgangatho ongasentla kodwa ngaphandle kokuba unemibuzo okanye abantu abancedayo, siza kukushiya uthe zava ibe izinto ziyimfihlo. Sifuna ukuba uzive usekhaya xa uhlala nathi, kwaye siza kuzama ukunceda kangangoko sinako.
Ukuba ungumntu wasemzini ibe awuqhelananga kakhulu neNorway, singathetha isiNgesi, isiTshayina nesiBurma.
Siphila kumgangatho ongasentla kodwa ngaphandle kokuba unemibuzo okanye abantu abancedayo, siza kukushiya uthe zava ibe izinto ziyimfihlo. Sifuna ukuba uzive usekhaya xa uhlala nat…
Iilwimi: 中文 (简体), English, Norsk
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kongsberg